Torohevitra avy amin'ny Semalt amin'ny fomba mahomby indrindra amin'ny mpifaninana aminao
Nisy fotoana nahitana ny ambony indrindra tamin'ireo mpifaninana tamin'ny milina fikarohanamampihorohoro ny orinasa. Na izany aza, ity tontolo dizitaly ity dia manome fahafahana tsy voafetra. Ireo mpifaninana dia afaka manampy anao indraindraymanatsara ny tetikady SEO.
Dinihina ny endrika isan-karazany amin'ny fahombiazan'ny SEO amin'ny fifaninanana ary ny fisian'ny aterineto,Azonao atao ny manamboatra teknolojia manokana amin'ny fivoaran'ny tranonkala. Semalt manam-pahaizana, Nik Chaykovskiy dia manondro fomba fanao fito izay hanampy anao hanatsara ny ankamaroan'ny mpifaninana - telekom anschluss umzug kosten.
Sarotra ny mamorona hevitra vaovao. Mijery ireo mpifaninanatranokala ao amin'ny tsenan'ny sasantsasany, afaka mahazo hevitra vaovao momba ny votoatin'ny blôgy ianao. Ny vaovao nomen'ny mpifaninana dia manome fahafahana ny raharaham-barotraManàna fomba fijery ankapobeny momba ny fivoaran'ny tontolon'ny indostria. Ny raharaham-barotra dia tokony hahita fahafahana hanatsara ny foto-kevitra novokarin'ny mpifaninana.
Ny loharanom-pifandraisana azo antoka dia afaka manatsara ny fahatanterahan'ny SEO manontolotetika. Ny fanadihadiana rohy dia manome anao ny fahatakarana ny tranonkala manome rohy amin'ny mpifaninana aminao. Ny fanehoana an'io rakitra io dia azonao ataoHazavao hoe iza no vohikala mendrika miara-miasa. Ny soso-kevitra hanamarinana ny rohim-pifandraisana mpifanolo-bodirindrina dia mety hampisy fiantraikany koa ny rohy malemyny SEO anao bebe kokoa.
Zava-dehibe amin'ny mpanentana ny fampahalalam-baovao sosialy raha vantany vao vita izanympanjifana, mpamatsy, ary mpiara-miasa. Ny mpanaraka matetika dia maneho fahalianana amin'ny marika maromaro ao amin'ny tsenan'ny nomena..Noho izany, andramomba hamporisihana ireo mpanaraka ny mpifaninana mba handrisika azy ireo hampiasa ny vokatra na ny serivisy izay omen'ny orinasanao.
4. Marika samihafa
Rehefa manangana tetik'ady SEO ny orinasa dia mamokatra votoaty izy, mampitombo ny fifandraisanamiaraka amin'ny mpanjifa, ary manatsara ny fahombiazan'ny tranonkala. Ireo hetsika ireo dia mamolavola ny endriky ny raharaham-barotra satria izy ireopublic accessible. Noho izany, ny mpanjifa dia mahatakatra ny maha-tokana ny vokatra sy ny serivisy amin'ny SEO.
Ny tombontsoa azo avy amin'ny fianarana ny fahalemen'ny mpifaninana. mampiasaSEO, azonao atao ny mamantatra ny haavon'ny tsy fahafalian'ny mpanjifa amin'ny mpifaninana aminao. Azonao atao ny manamarina raha toa ny motera fikarohanamamoaka fanamarihana ratsy momba ny mpifaninana. Raha mitaraina momba ny kalitaon'ny vokatra ny mpanjifa, dia mifantoka amin'ny fampiroboroboanany kalitaon'ny vokatrao.
6. Famantarana ireo paikady mahantra
Ny mpikaroka raharaham-barotra dia tokony handinika sy handinika ireo paikady natsangan'nympifaninana. SEO dia ahafahan'ny orinasa mamantatra ny tanjaka sy ny fahalemen'ny strategies SEO amin'ny fifaninanana. Noho izany, dingana toy izanydia haneho fomba fanao tsy mahomby izay tokony hataon'ny orinasa.
7. Fifandraisana Fifandraisana
Ny orinasa afaka miara-miasa amin'ny mpifaninana mba hahatratrarana tanjona iombonana. Guest blogdia iray amin'ireo fomba hanatsarana ny fifandraisana ara-barotra. Ny orinasam-pandraharahana dia afaka mampiasa ny fahafahana mitoraka blaogy mba hanomezan-danjavotoatin'ny mpanaraka amin'ny tranonkalan'ny mpifaninana. Ianao, ho setrin'izany, dia tokony hanome atidoha bilaogy ho an'ireo orinasa ireoManàna fikasana hanatratrarana tanjona iraisan'ny indostria.
Ny fandraharahana dia afaka mahazo fampahalalana manan-danja avy amin'ny paikady digital sy SEOnoraisin'ny mpifaninana. Ny tanjona fototra ao ambadik'izany dia ny hanatsara ny fahitana amin'ny aterineto sy ny fifamoivoizana amin'ny mpanjifa amin'ny fanatsarana ny SEO malemypifidianana, hita ao amin'ny paikady fifaninanana. Ny raharaham-barotrao dia afaka manova koa ny tetikady nomerika mahomby ampiasain'ireo mpifaninana.